> Resource> iPod> Olee otú iji Hichapụ Podcast si iPod
M pụrụ itinye pọdkastị jidesie m iPod, ma ha nwere ike mgbe abịa apụ. Mgbe m ikwunye m iPod n'ime kọmputa m, iTunes-adịghị aghọta na e nwere ihe ọ bụla pọdkastị na m iPod. Ma mgbe m iPod na-adịghị plugged na na m na-na m iPod, ọ bụla Podcast m mgbe na-etinye na ọ bụ n'ebe ahụ. M nnọọ nwetara m iPod banyere otu ọnwa gara aga. Na-agwụnarị m nke ohere biko nyere m aka.
Pọdkastị ka ị na-anọ ruo ụbọchị na ọkacha mmasị gị isiokwu. Ọ bụrụ na ị zọpụta ọtụtụ ochie podacats, nwere ike ị chọrọ ka ihichapụ ha onwe elu ohere. N'ezie, ọ bụ nnọọ mfe iji wepu pọdkastị site iPod, mgbe i nwere ihe omume a - Wondershare TunesGo ma ọ bụ Wondershare TunesGo (Mac). Na ya, i nwere ike ihichapụ ọtụtụ pọdkastị na oge.
Olee ka ihichapụ pọdkastị site iPod
Na akụkụ, anyị elekwasị anya na ihichapụ pọdkastị site iPod na Windows version. The Mac version na-arụ ọrụ a yiri nke ahụ.
Nzọụkwụ 1. Jikọọ gị iPod na kọmputa
Na-amalite, wụnye na ẹkedori Wondrshare TunesGo na kọmputa gị. Nke a na usoro arụ ọrụ nke ọma na kọmputa na-agba Windows XP, Windows 10, Windows 8, Windows 7 na Windows Vista. Mgbe ịchọputa gị iPod, a usoro ga-egosipụta ya Ama ekpe sidebar nke isi window.
Nzọụkwụ 2. Hichapụ Podcast si iPod
Ugbu a, pịa "Media" ke hapụrụ sidebar. N'elu akara ụfọdụ akara ngosi. Pịa "Pọdkastị" na-egosi niile pọdkastị na gị iPod. Tupu nhichapụ, ị nwere ike ndabere a pọdkastị na kọmputa gị maka ọdịnihu ojiji. Họrọ pọdkastị. Pịa "Export ka". Agagharị kọmputa gị ga-a ọnọdụ ịzọpụta exported pọdkastị.
Ugbu a, ọ bụ oge ka ihichapụ pọdkastị on iPod. Họrọ Podcast na ị chọrọ ka ihichapụ. Mgbe ahụ, pịa "Hichapụ". Jide n'aka gị iPod na jikọọ na kọmputa gị n'oge usoro.
Cheta na: Wondershare TunesGo akwado iPod aka 3/4/5, iPod kpochapụwo 1/2/3, iPod ịkpọgharịa 1/2/3/4 na iPod nano 1/2/3/4/5/6/7. Ugbu a, Mac version bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na iPod aka 4 na iPod aka 5. The akwado iPod aka 3/4/5 ga-agba ọsọ iOS 5, iOS 6, iOS 7, iOS 8 ma ọ bụ e wepụtara ọhụrụ iOS 9.
Nke ahụ dị mma. I ehichapụ pọdkastị ọma. E wezụga erasing pọdkastị site iPod, ị nwekwara ike ịgbakwunye pọdkastị gị iPod. Pịa "Tinye" ịgbakwunye pọdkastị site na kọmputa na-iPod.
Gbalịa Wondershare TunesGo ka ihichapụ pọdkastị site iPod.
3 Ụzọ nkwado ndabere na mpaghara iPod aka 5 tupu upgrading ka iOS 9/8